Dowladda Soomaaliya oo si diiran u soo dhawaysay aqbalaadda Maraykanka safiirka cusub ee Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo si diiran u soo dhawaysay aqbalaadda Maraykanka safiirka cusub...
Dowladda Soomaaliya oo si diiran u soo dhawaysay aqbalaadda Maraykanka safiirka cusub ee Soomaaliya
Warkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa aqbalaadda waraaqaha aqoonsiga ee uu Madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump kaga guddoomay Aqalka cad danjiraha cusub ee Soomaaliya ee Washington Mudane Ali Shariif Axmed kaasoo loo igmaday inuu sii dardargeliyo xiriirka saaxiibtinnimo ee tariikhiga ah, iskaashiga istaraatiijiyeed iyo wax wada qabsiga ee faa’iidada u leh labada dal, dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba waxay Dowladda Mareykanka u arkaan isbahaysi adag iyo saaxiib kaalin mug leh ka qaadanaya horumarka iyo hurosocodnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.”
Danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhin doona Washington wuxuu hore u soo noqday Danjiraha dalalka Faransiiska, Itoobiya. Wuxuu sidoo kale ahaa Wakiilka Joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan Midowga Afrika iyo Golaha Dhaqaalaha Qaramada Midoobay ee Afrika (UNECA).
Dowladda Soomaaliya waxay ku kalsoontahay in Danjire Axmed uu u gudan doono waajibaadkiisa shaqo e ah sidii uu usii xoojin lahaa xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo fursadaha casriga ah ay labada dhinac ka wada faa’iideysan karaan.
Previous articleSacuudiga oo ku biiraya isbaheysi ka howlgalaya marinada biyaha ee Bariga Dhexe
Next articleMaxaa sababay in shacabka Zambia loogu baaqo yareynta cunista soorta?
Warbixin ku saabsan caronavaris yuusuf garaad